Fikradaha lagu abaabulayo cashada shirkaddaada Kirismaskan | Ragga Stylish
Kirismaska ​​ayaa soo socda iyo casho shirkadda ayaa bilaabeysa in la qorsheeyo. In kasta oo ay umuuqato wax iska caadi ah, ballanta lala yeelanayo jawiga shaqada ee maalin walba nagu hareeraysan micnaheedu maahan wax xun, laakiin waa iska soo horjeed.
Dhacdooyinkan waan ka faa'iideysan karnaa si aan dadkaas si fiican ugu baranno inagu xeeran maalinteenna maanta. Taasna kaliya maahan, laakiin sidoo kale in la iloobo khilaafaadka inta badan jira.
Kadib casho shirkadda, maahan inay noqoto caajis ka dib cashada. Shirkado aad u tiro badan ayaa sharad ku samaynaya cashooyin xiiso leh oo ay ku raaxeysanayaan fiid damaashaad shaqaalahooda.
1 Casho shirkadeed oo mawduuc leh
2 Jirdhis jimicsi
3 Sii socda ilaa waagu ka beryo
5 Sawiro iyo baashaal
Casho shirkadeed oo mawduuc leh
Kulamada iyo fikradaha qado ee shirkadu had iyo jeer waa baashaal. Taasi kaliya maahan, laakiin waa cunsur muhiim u ah isku xirka shaqaalaha iyo madaxda.
Ugu horreyntii, waa lagama maarmaan in la doorto mawduuc, ka dibna u gudub dharka. Fikrad fiican waa in la dejiyo saddex abaalmarin saddexda ugu habboon ama dharka. Habkaas, shaqaale kastaa wuxuu yeelan doonaa xamaasad dheeraad ah markay tahay labbiska.
Gymkhana wuxuu noqon karaa mid aad u xiiso badan isla markaana abuuri kara wakhti fiican. Halxidhaalayaasha, tijaabooyinka kaftanka, kacsanaanta ama dabacsanaanta ayaa ah qaar ka mid ah qaybaha shirkaddan cajiibka ah ee 'gymkhana'. Waxay sidoo kale noqon kartaa ikhtiyaar in laga dhex iibsado hadiyadaha oo dhan iyo in saaxiib kasta oo doonaya tooda ay tahay inuu ka gudbo imtixaan.
Sii socda ilaa waagu ka beryo
Waa habeen gaar ah, oo u dhexeeya asxaabtaada ama asxaabtaada, mana aha inay jiraan waqtiyo xadidan. Haddii aad waqti fiican qaadanaysid, waa qalad inaad xafladda jarto. Sannadka oo dhan xiisado shaqo oo badan, dhibaatooyin iyo doodo ayaa isa soo taraya. Ugu yaraan, cashada Kirismaska ​​waa inaad si buuxda ugu raaxeysataa iyaga.
Qoob-ka-ciyaarka ama heesida. Ujeeddadu waa in la sameeyo wax runtii xiiso leh, iyadoon loo eegin qaababka muusikada ama heesaha.
Sawiro iyo baashaal
Xilligu wuxuu mudan yahay in la dhinto. Miyaad qiyaasi kartaa maamulahaagu inuu sameeyo astaamo?
Ilaha sawirka: Suuqa Bilaashka ah / www.cenasdeempresamalaga.es
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » dhaqanka » Fikradaha lagu abaabulo cashada shirkaddaada Kirismaskan